Ny Zafisoro dia foko malagasy monina any amin' ny morontsiraka atsimo-atsinanan' i Madagasikara, ka ao amin' ny distrikan' i Farafangana no ahitana azy ireo betsaka. Heverina ho zana-pokon' ny Antefasy ny Zafisoro sady mitovy faritra onenana amin' ny Antefasy. Maro ireo etnôlôga no mihevitra fa ny Antefasy sy ny Zafisoro koa, dia zana-pokon' ny Antesaka. Eo amin' ny 91 000 ny isan' ny Zafisoro.
3 Faritra onen' ny Zafisoro
Tantaran' ny ZafisoroHanova
Araka ny lovantsofin' ny Antefasy anefa dia avy any anaty tanin' i Afrika ny razamben' izy ireo atao hoe Ndretsileo (Andriatsileo). Te honina amin' ny faritr' i Madagasikara manamorona ny reniranon' i Menarandra (any atsimo-andrefana) i Ndretsileo. Efa nalain' ny Bara anefa izany faritra izany, ka noho izany ny zafin' i Ndretsileo atao hoe Ndrembolanony (Andriambolanony) dia nifindra nankany atsinanana kokoa niaraka tamin' ny mpajaka niara-nanapaka taminy atao hoe Isoro. Taty aoriana dia niorim-ponenana tao amin' ny morontsiraka atsinanana mba hanao raharaham-barotra amin' ny Eorôpeana izay niantsona teo ny Antefasy. Noho ny tsy fifanarahana anatiny ny amin' ny fizaràna ny tany dia nisaraka tamin' ny taranak' i Ndrembolanony ny taranak' i Isoro ka nantsoina nanomboka tamin' izay hoe Zafisoro, izany hoe "Zafin' Isoro". Izany fisarahan' ny Zafisoro sy ny Antefasy izany dia niseho tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-16 sy ny fiandohan' ny taonjato faha-17, raha niara-nanapaka tao Farafangana sy ny faritra manodidina ny mpanjaka roa Isoro sy Ndrembolanony. Nanorina ny fanjakany manokana ny taranak' Andriambolanony, dia ny fanjakana antefasy, fa ny taranak' Isora kosa nanorina ny fanjakana zafisoro. Nanomboka tamin' izay dia tsy nitsahatra niady ny Zafisoro sy ny Antefasy ka lasa foko roa samy hafa.
Faha Fanjakana MerinaHanova
Tamin' ny taonjato faha-19 dia ny Merina no nanapaka ny Zafisoro sy ny Antefasy taorian' ny ady lava, satria ataon' izy ireo fa fomba iray hampiravina ny disadisan' ny foko roa tonta izany. Ny fepetra nangatahin' ny Zafisoro dia ny hahafahan' izy ireo, alohan' ny Antefasy, hisafidy ny governora solon-tenan'ny mpanjaka merina (Ranavalona I) hanapaka ao amin' izy ireo, avy ao amin' ny renivohitra Mahamanina. Neken' ny mpanjaka izany fangatahana izany ka Rainilaitafika no voatendry. Napetraka tao Mahamanina ny governora niaraka tamin' ny tafika tamin' ny taona 1830. Araka izany dia tafiditra tao amin' ny Fanjakan' Imerina (izay nantsoina hoe "Fanjakan' i Madagasikara") ny Zafisoro.
Taorian' ny fahaleova-tenan' i MadagasikaraHanova
Na taty aorian' ny fahaleovan-tenan' i Madagasikara dia tsy nitsahatra ny adin' ny Zafisoro sy ny Antefasy. Tamin' ny taona 1990 dia rafitra niady nifamono ny roa tonta tamin' ny volana Septambra, ka olona 40 no maty hatramin' ny volana Oktobra. Taorian' izany dia nisy ny fifanarahana nosoniavin' ny roa tonta ny amin' ny tsy hisian' ny ady intsony. Ankehitriny dia mbola misy ny tsy fifanarahana madinidinika, indrindra ny disadisa momba ny tanim-bary izay atahorana hampipoaka indray ny ady.
Ny ankamaroan' ny Zafisoro dia manaraka ny fivavahan-drazana animista. Tsy misy fiavahany firy amin' ny fomba amam-panaon' ny Antefasy ny an' ny Zafisoro. Ohatra, tsy mandevina ny maty izy ireo fa mametraka azy anaty kibosy, izay trano masina natokana ho an'ny maty. Maro koa ny Zafisoro manaraka ny fivavahana kristiana.
Faritra onen' ny ZafisoroHanova
Ny tany onenan'ny Zafisoro dia ao amin' ny morontsiraka atsimo-atsinanan' i Madagasikar, ao amin' ny faritra Atsimo-Atsinanana ao atsimon' i Farafangana hatrany amin' ny Tahirin-javaboarin' i Manombo. Ny foko ao avarany dia ny Antefasy, ny ao andrefana dia ny Bara, ary ny ao atsimo dia ny Antesaka.
↑ Janine Ramamonjisoa. L'ethnicisation des rapports sociaux à Madagascar (suite). L'Express de Madagascar, notsidihina tamn' ny 5 Desabra 2015.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zafisoro&oldid=1011014"
Dernière modification le 25 Aprily 2021, à 11:20
Voaova farany tamin'ny 25 Aprily 2021 amin'ny 11:20 ity pejy ity.